डाक्टर दिएका थिए १२ वर्षको म्याद ! जन्मदिनमा आमाले खुलाईन सोनीकालाई समलिंगी भनिनुको रहस्य ( भिडियो ) – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsडाक्टर दिएका थिए १२ वर्षको म्याद ! जन्मदिनमा आमाले खुलाईन सोनीकालाई समलिंगी भनिनुको रहस्य ( भिडियो )
वोव नेपाल नामक युटूब च्यानलबाट चर्चामा आएकी भिजे सोनीका रोक्काले आफ्नो १५औं जन्मदिन मनाएकी छिन । उनले शनिबार ३ करोडको लगानी भखरैमात्र संचालनमा ल्याएक रेस्टुरेन्टमा आफ्नो जन्मदिन मनाएकी हुन् ।
हिजो रहेको उनको जन्मदिनमा अभिनेत्री शुष्मा कार्की, हट्टी नट्टी अनुपम शर्मा, सोनीकाकी बहिनी, आफन्तजन तथा पत्रकारहरुको उपस्थित थिए ।
कार्यक्रममा सोनीकाकी आमालाई पत्रकारहरुले सोनीका छोरा हो या छोरी हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । जसको जवाफ दिदै उनकी आमाले छोरी १ वर्षको हुदा धनगडीबाट पहाडमा ल्याएको र छोरी १ वर्ष हुदा सम्म पनि उनलाई छोरीको बारेमा केहि थाहा नभएको बताइन ।
उनले एकदिन छोरीलाई घाममा राखेर तेल लगाउदै गर्दा सोनीका छोरा हो या छोरी हो भन्ने कन्फुज भएर सोहि समय उनलाई हस्पिटल लिएर गएको र डाक्टरले सोनीका १२ वर्ष नहुन्जेल केहि थाहा नहुने बताएपछि उनले घर लगेर सोनीका लाई छोरी बनाएको बताइन ।
साथै सोनीका सोयमले कहिले मलाई केटा त कहिले केटि मन पर्ने र भोलिको दिनमा के हुन्छ थाहा नभएको बताइन ।